प्रदेशमा मुख्य मन्त्री, सभामुखको तलब- कसको कति ? – rastriyakhabar.com
प्रदेशमा मुख्य मन्त्री, सभामुखको तलब- कसको कति ?
काठमाडौं। सरकारले प्रदेशमा रहने सबै पदाधिकारीको सेवा-सुविधा र तलबमान तोकेर सातै प्रदेशमा पठाएको छ। सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७० तोकेको छ। यसैगरी, मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको तलब ४७ हजार तोकिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले सातै प्रदेशमा एकरुपता कायम होस् भन्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको तलबमान प्रदेशमा पठाइएको जानकारी दिए। ‘यो प्रदेशको आफ्नै अधिकार हो तैपनि एकरुपता होस् भनेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत हामीले मोडल पठाएका हौं’, उनले अन्नपूर्णस“ग भने।
संविधानको धारा १९६ मा प्रदेशका सबै पदाधिकारीको पारि श्रमिक र सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशसभाले त्यस्तो कानुन नबनाएसम्म सेवा(सुविधा तोक्न सहज होस् भन्दै सरकारले औचित्यका आधारमा तलबमान तयार पारेर पठाएको हो।
आवास व्यवस्था, दैनिक भत्ता स्२५ सय
फर्निचर स्१५ हजार
आवास स्मासिक १२ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता स्२ हजार
तलब स्५३ हजार
बैठक भत्ता स्७५०
यात्रा बिमा स्१० लाख
तलब स्५० हजार
तलब स्४५ हजार
आवास सुविधा स्१२ हजार,
आइतवार, फाल्गुन ६, २०७४ मा प्रकाशित